Dr. Tint Swe's Writings: Acute Periphreral Vertigo အမူးရောဂါ
ကျွန်တော် မနက်အိပ်ယာထကတည်းက နေမကောင်းပါ။ ဒေါ်မြမြအေးက ကနေ့မနက် Colonoscopy screaming test အူမကြီးလမ်းကြောင်းစစ်ဆေးခံဖို့ရှိတယ်။ အဲတာကို ကျွန်တော်ကတော့ ၁၂-၃-၂ဝ၁၅ နေ့ကတည်းကစစ်ထားပြီးပါပြီ။
၂-၂-၂ဝ၁၅ နေ့က ရုတ်တရက်ခေါင်းမူးပြီး ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်လျှက်သားကျသွားတယ်။ ညပိုင်းမှာမသက်သာတာနဲ့ ER အရေးပေါ်ဆေးရုံကို သွားရတယ်။ Brain CAT အထိရိုက်စစ်တယ်။ ဦးနှောက်ကောင်းပါသတဲ့။ ရောဂါအမည်တပ်တာက Dizziness (Uncertain cause) ဖြစ်ပါတယ်။ Dizziness ဆိုတာ Vertigo ဖြစ်ပါတယ်။ Balance problem ကိုယ်ခန္ဓာ မထိန်းနှိုင်မှုပြဿနာကနေ ခေါင်းမူးတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကြားထဲမှာ ဆေးလေး ၁ ပြားကို တခါတရံသာသောက်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကနေ့မနက်အိပ်ယာအထ ပတ်ခြာလည်အောင် ခေါင်းမူးပါတော့တယ်။ ဆေးစစ်တဲ့ဆီမလိုက်နိုင်ပါ။ သားတယောက်နဲ့သာသွားရတယ်။ မိတ်ဆွေတယောက်ရောက်လာပြီး လိုတာလေးတွေလုပ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆေးရုံကပြန်လာတော့လည်း ကျွန်တော်က အိပ်ယာထဲမှာပဲ။ အန်တီမှာ အူမကြီးကင်ဆာမရှိ။ (ပေါလစ်) အသီးလေး ၂ ခုတွေ့လို့ တခါတည်းဖြတ်ပေးတယ်။ (ဘိုင်အော့ပ်စီ) လုပ်မယ်။ ၁ဝ ရက်နေ အဖြေသိရမယ်တဲ့။
ကျွန်တော့အမူးရောဂါ ဒီတခါ အတော်ဆိုးတယ်။ အန်ချင်တဲ့အထိ (ကန်တော့ပါ) မူးတယ်။ (ပိုဇေရှင်) အနေအထား ပြင်တာနဲ့ မူးတယ်။ အထိုင်-အထ၊ ဘယ်-ညာ၊ အလှည့်-အပြောင်း၊ အနိမ့်-အမြင့်။ ညနေ ၆ နာရီလောက်မှာ ထနိုင်လာပြီး၊ ဒုတိယအကြိမ် ဆေးတလုံးသောက်ပါတယ်။ မေးခွန်းတွေထဲက အီးမေးလ်နဲ့ လာတာတွေကိုတော့ ဖြေနိုင်သွားပြီ။ (မက်ဆေ့ခ်ျ) နဲ့ (ချတ်ဘောက်စ်) ကလာတာတွေကိုတော့ ခွင့်ပန်ပါတယ်။ ဆောရီး။ ပုံမှန်အထိမရောက်သေးပါ။ အန်တီကလည်း လျှပ်စစ်သုံးကိရိယာတွေကို ၂၄ နာရီကြာမကိုင်ရသေးလို့။ စားစရာလည်း ဖြစ်သလိုနဲ့ ဖြစ်အောင် လုပ်ရတယ်။
Vertigo (ဗာတိုင်ဂို) ဖြစ်ရင် လည်နေသလိုမူးတယ်။ မြင်မြင်သမျှက လည်နေသလိုထင်တယ်။ ဟန်ချက်မထိန်းနိုင်ပဲ ထိုင်ကျ၊ လဲကျတော့မယ်။ နားအတွင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ အတွင်းနားကနေ ဦးနှောက်ကို ကမ္ဘာ့ဆွဲအား အခြေအနေကို သတင်းပို့ပေးနေပြီး ကိုယ်ခန္ခာကို ထိန်းနိုင်အောင်ကူညီနေတယ်။
မူးပုံမူးနည်းကတော့ Spinning ဂျင်လှည့်သလိုမူးတာ၊ Tilting စောင်းသွာသလိုခံစားရတာ၊ Swaying ဖယ်ရမ်းခံရသလို ခံစားရတာ၊ Unbalanced မှချေပျက်တာ၊ Pulled to one direction တဖက်ဖက်ကိုဆွဲယူခံရသလို အမျိုးမျိုးမူးနိုင်တယ်။ မူးတာနဲ့အတူ ပျို့ချင်လာနိုင်တယ်။ လေတက်မယ်။ ခေါင်းကိုက်မယ်။ ချွေးပြန်မယ်။ နားထဲမှာဝီဝီ မည်နေမယ်။ တချို့မှာ လှုပ်ရှားတာမှာ ဆတ်ကနဲဖြစ်နိုင်တယ်။
Acute Periphreral Vertigo Emergency treatment ရုတ်ရက် အပြင်းအထံ ခေါင်းမူးရောဂါအတွက် အရေးပေါ် ဆေးများ
1. Meclizine 25 mg PO 8-12 hourly သောက်ဆေး (ကျွန်တော် အခုသောက်နေပါတယ်)၊
2. Dimenhydrinate 50-100 mg IM or PO4hourly အသားထိုးဆေး နဲ့ သောက်ဆေး၊
3. Diphenhydramine 25-50 mg IM or PO6hourly အသားထိုးဆေး နဲ့ သောက်ဆေး၊
4. Cyclizine 50 mg PO4hourly (200 mf.24 hours) သောက်ဆေး၊
5. Scopolamine 0.5 mg Intra-dermal patch 3-4 timesaday (Behind ear) နားနောက်မှာ ကပ်ခွါဆေး၊
6. Hydroxyzine 25-50 mg6hourly သောက်ဆေး၊
7. Promethazine 25-50 mg 6-8 hourly သောက်ဆေး၊
၂၁-၈-၂ဝ၁၅ (ည ၈ နာရီ ၅ဝ မိနစ်)